Maitiro ekuisa AMDGPU PRO vhidhiyo madhiraivha pane Linux? | Linux Vakapindwa muropa
Maitiro ekuisa AMDGPU PRO vhidhiyo madhiraivhi paLinux?
Patakatanga kusvika kuLinux imwe yenyaya dzinowanzoitika misoro iyo yavanowanzo tenderera kuisa kwevatyairi vhidhiyo pachirongwa. Sezvo kuwedzera kune izvi, zvakare kune avo vane komputa makomputa vane mukana wekuwedzera kana kushandura vhidhiyo kadhi.
Uye ndopaya panodiwa kuti tikwanise kuisa vatyairi vhidhiyo vekadhi redu, mune ino kesi isu ticha tarisa pakuiswa kwe AMD vhidhiyo madhiraivha.
Kuita chaiyo kuisirwa kwevhidhiyo madhiraivha mune yedu Linux kugovera Izvo zvinodikanwa kutanga waziva iyo modhi uye chipset yekadhi redu.
1 Nzira yekuziva sei iyo modhi yekadhi kadhi yedu?
1.1 Vhidhiyo Mutyairi Download
2 Kuiswa kwe AMDGPU Pro madhiraivha
3 Maitiro ekuisa AMD GPU PRO madhiraivha muUbuntu uye zvigadzirwa?
4 Maitiro ekuisa AMD GPU PRO madhiraivha pane Arch Linux uye zvigadzirwa?
Nzira yekuziva sei iyo modhi yekadhi kadhi yedu?
Nokuda kweizvi Isu tinofanirwa kuvhura terminal uye tigoita uyu murawo mairi:
Paunenge uchiita uyu murairo data rekadhi redu revhidhiyo richadhindwa pachiratidziri, kwandiri ndinowana zvinotevera:
Sezvo ini ndine AMD processor ine GPU yakabatanidzwa iyi ine iyo Radeon R5 modhi. Neruzivo urwu rwuri muruoko, isu tinopfuurira kurodha pasi mutyairi wakakodzera wesystem yedu.
Vhidhiyo Mutyairi Download
Tinofanira kuenda kune yepamutemo AMD peji kurodha mutyairi. Iyo yekubatanidza ndeiyi.
Pano ndaisa katsamba kadiki keUbuntu nevashandisi vanobva (Linux Mint, Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu, nezvimwe) pamwe nevevashandisi veArch Linux uye zvigadzirwa zvayo.
Panyaya yekuparadzirwa uku tinogona kumisikidza kumisikidza tisinga shandisire kushandisa nzira yakajairika, idzi nzira dzinotsanangurwa pazasi.
Kuiswa kwe AMDGPU Pro madhiraivha
Iine faira rakadzingwa, isu tinoenderera kuchidzvinyirira ne:
Iye zvino isu tinofanirwa kuwana dhairekitori richangobva kugadzirwa, uko XX inotsiviwa neshanduro inoenderana neyako kurodha pasi:
Pano muchikamu chino, vese vashandisi veDebian, Ubuntu uye zvigadzirwa zveizvi zvakafanira kuti isu tigone kugonesa kwema32-bit muhurongwa, isu tinogonesa izvi ne:
Isu tinoenderera nekumisikidza nekuita script iri mukati mefaira isu tinoita izvi nekutaipa:
Kunyangwe mamwe ekurudziro angave ari:
Kana ivo vanogona zvakare kushandisa:
Mushure mekumisikidzwa, isu tinongofanirwa kutangidza komputa yedu kuti shanduko dzitange panguva yekutanga system.
Maitiro ekuisa AMD GPU PRO madhiraivha muUbuntu uye zvigadzirwa?
Kune avo vari vashandisi veUbuntu kana sisitimu yakatorwa pazviri, Isu tinogona kufambisa kuiswa kwevatyairi, nekushandisa yechitatu-bato repository.
Iyi yekuchengetera inochengetwa nechikwata chevashandisi vanogara vachichichinjisa uye chinotipa nzira iri nyore yekuwana iwo madhiraivha.
Ingo wedzera icho kuhurongwa ne:
Uye isu tinoenderera nekuisa ne:
Uye kana iwe uchida kuisa rutsigiro rweVulkan:
Maitiro ekuisa AMD GPU PRO madhiraivha pane Arch Linux uye zvigadzirwa?
Muchiitiko cheArch Linux, Manajaro, Antergos kana chero vashandisi vanobva kuisa aya madhiraivha anogona kuve ari maviri akareruka uye zvishoma kuomarara uye izvi imhaka yekuti Zvinoenderana zvakanyanya nekugadziriswa kwepacman.conf yako faira pamwe neyako system software.
Ndinokutsanangurira, kubvira Madhiraivha evhidhiyo e AMD haagare achienderana neshanduro yazvino yeXorg uye linux kernel, uyezve inoda kuti iwe uve neye multilib repository inogoneswa pairi.
Pano kuisa vatyairi nenzira yakapusa iri nerutsigiro rwe pacman graphic maneja, sezvakaita Octopi, saka unofanirwa kuve neAUR repository inogoneswa uye uve nemubatsiri.
Iwe unoisa izvi ne:
aurman -S octopi octopi-notifier
Waita izvi unogona kutsvaga pasuru yacho amdgpu-pro muna Octopi uye riise nerubatsiro rwayo.
Nekuti iyi Arch Linux mutyairi yekumisikidza musoro wenyaya unenge wakavhurika, ini ndichagovana kuisirwa kwayo mune yakatsaurwa posvo yayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Maitiro ekuisa AMDGPU PRO vhidhiyo madhiraivhi paLinux?
Nekuti kuomesa hupenyu hwako, isa Manjaro uye iyo AMD mutyairi uye chero inozviisa pachayo. Paunoisa Manjaro inokubvunza kana iwe uchida mutyairi wemahara kana muridzi uye kana gare gare uchida kuchinja, semuenzaniso iwe muridzi akaisirwa, nekudzvanya kamwe chete muridzi akabviswa uye mutyairi wepachena akaiswa uye chinhu chimwe chete zvinoitika nekernel kamwe chete uye iwe une kernel yakaiswa uye yakagadziridzwa grub uye mashandisiro akaiswa mune pfupi pfupi mutsara mune terminal uye hapana repository yekuwedzera. Tungamira kumusoro kuManjaro uye unakirwe nenguva yako uye usatambise nguva kuisa madhiraivha.
Iwo madhiraivha maviri akasununguka, saka haugone kusarudza iyo "yepamutemo" imwe.
zvakanaka, ndaverenga tsamba yako, uye ndinoona kuti wanga uchifunga nezve maitirwo acho mune arch-linux, ini handinyatso kujeka kuti ndinogona kuzviita, nekuti ndinotya kuti haienderane neyazvino xorg , Ndiri kunyora kuti ndikubvunze kana iwe uchiziva chimwe chinhu nezvazvo, kana chiri chakaomarara uye kunyanya kana zvichikosha nekuremekedza mutyairi wepachena.
Muchiitiko changu, ini handioni kuti yakakodzera nguva yekumisikidza amd-gpu mutyairi sezvo isina kuvandudzwa mune imwe nguva uye vhezheni yavanopa yanonoka.
Iko mukana wauinawo neArch Linux uye zvigadzirwa ndezvekuti iwe unogona kuwana shanduro dzekare dzeXorg, ingori nyaya yekutsvaga kuti ndeipi vhezheni inoenderana neshanduro yemutyairi mune yako kesi.
Mubvunzo wekupedzisira, ndichave akajeka, Vulkan iri kuita zvirinani.
Zvinoitika kwandiri ne xubuntu 18.4 kuti haina kuziva maviri ma skrini kubva pakutanga, kana ndikatanga muhwindo $ 7 hongu; asi kuitira kuti ma skrini maviri azivikanwe, ndinofanira kuburitsa vga tambo kubva pane imwe skrini ndoibaya zvakare mukati mushure mechinguva (iyo imwe yekutarisa iri kuburikidza neDVI)
kunyangwe ndotevedzera zvakadii mirairo paconsole, hapana chekuita
Ndinokutendai, muri rudo, ndakatora nguva yakareba ndichitsvaga kusvikira ndawana ichi chinyorwa uye ndotangazve uye ndione kuburikidza neyechipiri skrini
ndine kubuntu uye kde inoshandisa xorg?
ArcoLinux vhezheni 6.9.1 yave kuwanikwa kurodha pasi